Carlos Tevez: oo horay ugu soo dheelay labada Manchester ayaa u wareegay Shiinaha - BBC Somali
Carlos Tevez: oo horay ugu soo dheelay labada Manchester ayaa u wareegay Shiinaha
Carlos Tevez oo horay ugu soo dheelay kooxaha Manchester United iyo Manchester City ayaa ku biiray kooxda Shanghai Shenhua ee dhisan dalka Shiinaha sida ay xaqiijisay kooxdu Khamiistan.
Shanghai ayaa la soo wareegtay ciyaaryahankan reer Argentina ee 32 jirka ah oo ka tirsanaa hadda naadiga Boca Juniors, laakiin wax faahfaahin ah lagama bixinin qandaraaskiisa.
Kooxda Shanghai oo uu hadda tabobaro Gus Poyet oo horay macallin ugu ahaa koxda Brighton ayaa lagu soo waramayaa in ay kula soo wareegeen heshiis ku kacaya 40 milyan oo gini, waxaa kale oo heshiiska ku jira mushahaar uu qaadan doono todobaadkii oo 310,000 oo gini.
Kooxda Boca Juniors ayaa soo qortay "nasiib wanaagsan ayaan kuu rajaynaynaaa Carlitos. Waligaa quluubtanada ayaad ku jiri doontaa."
Wenger: Guushii xalay muhiim ayay ahayd
Carlos ayaa todobo sano ka ciyaaray Horyaalka Ingiriiska wuxuuna horyaalka kula guulaystay labada Manchester-ba.
Sidoo kalana wuxuu horyaalka Yurub la qaaday Man United sanadkii 2008-dii ka hor inta uusan ku biirin kooxda Juventus sanadkii 2013-kii, halkaas oo uu kula guulaystay labo koob oo horyaalka Talyaaniga ah.
Bishan 23 keediina Chelsea ayaa heshiis la gaartay kooxda Shanghai SIPG ee Shiinaha ka dhisan si ay ugu wareejiyaan Oscar oo ah ciyaaryahan reer Brazil ah oo 25 jir ah, waxaana lagu qiyaasay in heshiiskaasi uu ku kici doono 60 milyan oo gini.